Aicuña - yokuzijwayeza, ezempilo ukupha
Ezemidlalo Ukufaneleka, Ithrekhi futhi ensimini
Emgogodleni - isisekelo ezimpilweni zethu. Kuyinto insika okuyinto oba impilo emzimbeni. I lesinesitfombe-sibuko backbone - ukusebenza kangcono izitho zangaphakathi kunalokhu oyikho nezimo ezingasho mobile - ikakhulukazi ezithweni okuqonda umsebenzi wangaphandle izwe elingcono. Yingakho zemisipha ohlelweni lwezempilo - a Isiphephelo ukusebenza evamile umzimba womuntu.
Aicuña - yokuzijwayeza ngoba umgogodla ezingaba ambuyisele unenkululeko kanye nezempilo. kakhulu Igama ejimini kunzima ukuhumusha izwi nezwi, ngoba linencazelo ejulile. It ungaboniswa cishe ngokuthi "ukulalela umzimba wakho bese ukuhambisa kuye."
Abay Emshi umelaphi kusukela Kazakhstan, isungule lolu iqoqo umzimba emuva ekuphileni. yena walimala kakhulu ngemva iqhaza empini e-Afghanistan. Abay ngifuna uhlelo ezingaba ukuyibuyisa ekuphileni okuvamile. Ngatadisha ukuphulukiswa kwabantu ngokulungisa ukuma kwamathambo uhlelo kancane kancane ubhala ulwazi a ephelele impilo nefilosofi. Aicuña - yokuzijwayeza, okubandakanya engaphezu kuka-1000 umzimba!
Ukuphumelela yokuzijwayeza Aicuña Abay lokuqala ngibe. Ngemva wasiza izinkulungwane zabantu abafuna impilo ephelele futhi. Ngo-1998, wabonwa njengenye abaphulukisi best of Russia. Emadolobheni amaningi ngaqala ukuvula izikhungo zezempilo ukuthi abenza le ndlela emgogodleni ukuphulukiswa.
Aicuña: izinzuzo zezempilo
Gymnastics kuthinta umzimba iyonke. Lokhu kwenzeka ngoba zonke umzimba Lihlobene nokubhekana ubuso vertebra ethize. Ngokwesibonelo, owokuqala exhumene nezomuntu, kwesibili - emehlweni nokunye. Okungukuthi, ukubuyisela impilo vertebra ngamunye ngokukhethekile, futhi wesimethri yomgogodla iyonke, kungenzeka ukuthuthukisa impilo yabantu. Aicuña - umzimba ukuthi kungaba ngcono kakhulu kwegazi legazi, igazi ligeleze izitho zangaphakathi, uqinise uzimele kwemisipha. Plus, izivikeli mzimba iqala ukuvikela umzimba amandla egcwele.
Lo mphumela ibangelwa ngobumnene ngilulekela izicubu. Phakathi izivivinyo wayekwenza lokuhlushwa ngokugcwele engqondweni. Lo msebenzi wawuhilela ngisho imisipha ezijulile ezingenziwanga evame ukusetshenziswa ekuphileni kwansuku zonke. Simisiwe imisipha onesifo esishubile uphumule, yakhulula kwalapho ukuthi abangu bagibele.
Uma ufuna ibe nempilo, bese kudingeka ukuba Aicuña. Gymnastics, umzimba okuyinto yenzelwa ukubuyiselwa ezempilo, efanelekayo kokubili labo asebamukele ukuba babe nezinkinga ezingathí sina, futhi abakholelwa ukuthi ukwelashwa okungcono - kuyinto zokuvimbela.
Ukusebenzisa sokuqala ngqa uyakwazi ukwenza ngisho abantu abakhubazekile ezinzima. Ngemva ngesifundo sesibili umuntu ofisa umzimba kukhona konke free, futhi ulungele ukuhamba ukuze eziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe. Gymnastics ngoba umgogodla Aicuña kufinyeleleke kuwo wonke umuntu. Nsuku zonke ukulawula umzimba wakhe kuba lula futhi kube lula.
Ezifana nokuthi ngamunye ohlelweni ukubuyisela Aicuña impilo - akuyona jikelele, futhi kunabantu abahlala bematasa hhayi kuphela akuzange kusize, kodwa umonakalo. Ukuze uqale abaqhuba le ejimini kuyadingeka, ngemuva kokuxoxisana onguchwepheshe futhi ngaphansi kokuqondisa nomqeqeshi. Abafundisi bathi Aicuña - yokuzijwayeza, ayinakho Izimo. Nokho, ukusebenzisa ingqondo izinkanyiso imithi basikisela ukuthi umsebenzi akufanele kwenziwe:
izimila ebulalayo, ikakhulukazi endaweni sokukhubazeka komgogodla.
Exacerbation izifo ezingamahlalakhona.
Phakathi izifo sibi ezithathelwanayo.
iziyaluyalu kakhulu engqondweni.
Gymnastics Aicuña: umsebenzi
Qaphela futhi ngamabomu indlela - isimiso esiyinhloko Aicuña. Gymnastics, okuyinto umzimba nzima olwengeziwe, kungase kwenziwe imizuzu 10, futhi mhlawumbe ihora. Konke kuncike izinga lakho ukuqeqeshwa impilo.
Isifundo 1. Hlala esitulweni. Izinyawo parallel nomunye, kuvumelana emahlombe. Kancane qondanisa emuva yakho. NEKUKHULUMA, uhlale kulesi sikhundla ngoba 3-4 imizuzu. Ukwandisa usuku nosuku umsebenzi isikhathi.
Isifundo 2: Bamba emuva ngqo, kancane futhi ngobumnene Arch nomnyango wakho lumbar.
Isifundo 3: I emuva iqondile. Zama ukuze agobe esifubeni ngangokunokwenzeka kusengaphambili. Bamba lokhu ukuma. Kungase uzizwa ukuncinza kabuhlungu emgogodleni.
Ukuzivocavoca 4. Ngalesi umsebenzi, ngeke nje baqinise Uhlaka kwemisipha emuva, kodwa futhi asize umzimba ukuqeda ubuthi, ozokusiza ngcono izivikeli mzimba. Isikhundla njengoba ekusebenziseni odlule. Emuva iqonde, esifubeni phambili silingo, draw esiphezulu esiswini. Bamba lesi sikhundla ngoba 3-4 imizuzu.
Ukuzivocavoca 5. Qhubeka ukubamba isikhundla eyedlule. Manje, zama ngangokunokwenzeka ukuhambisa izindwani komunye nomunye. Ngalesi umsebenzi, uzokwazi ukuthuthukisa kwegazi futhi sithuthukise isikhumba ithoni.
Ukuzivocavoca 6. Manje phinda izindwani ukuxuba khona, kulokhu sase isisu ekhululekile.
Odokotela batusa ukuba bangalibali impilo yabo uma kukhona oyingozi futhi yizifo ezingamahlalakhona, kuba ngisho esikhathini sempilo. Gymnastics Aicuña - iqoqo umzimba, ukwenza lokho, niyothola impilo iminyaka eminingi.
Lavrova Natalya Aleksandrovna: Biography nesithombe
Masterkova Svetlana: impumelelo kanye biography yezemidlalo
Umehluko AWPC futhi WPC. amazinga AWPC
Izindlela kanye nemishini long jump isiqalo ukugijima. Amazinga e-long jump
Indlela ukwandisa ukukhula ekhaya ngaphandle amakhemikhali
Kostina Oksana: impumelelo kanye biography yezemidlalo
Ikhekhe iminyaka engu-20 intombazane. kufanele kube kanjani?
Ukumodela igqoka, design isimiso
Fuagra - zokupheka kanye nemfihlo yokupheka
Indlela ukudlula ingxoxo nothile? izimfihlo zempumelelo
Isiqeshana ukukhubazeka - imithetho emisha
Game Incazelo futhi Izidingo zesistimu Heroes of the Storm
Brake pads "Kalina": esikhundleni. Brake pad esikhundleni "Kalina-2". Esikhundleni front futhi bakhulise ukubopha pads kwi "Kalina" (inqola)
VideMoney: ukubuyekezwa. VideMoney - ikhokhwe survey
Izinkomba emhlabeni: futhi bayini?
Umlingisi Sadalsky Stanislav Yurevich: Biography, empilweni yakho, i-Filmography
John Higgins: Biography, amaqiniso okuphila, izithombe
Nuclear chain reaction. Imibandela wocwaningo lwezindaba zenuzi chain reaction